I-Ultrasonic Stem Cell Isolation - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-ultrasonic cavitation iyindlela ephumelelayo kakhulu yokumisa amangqamuzana amancane avela kumuntu we-adipose tissue.
I-Ultrasonically isolated stromal spray fraction (SVF) ikhombisa amandla amakhulu okuvuselela izicelo zezokwelapha.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza okukhethwa kukho okuhlukahlukene kwe-sonication eqondile nengayona okumele ivunwe amaseli e-stem.
I-Ultrasonic Isolation yamaseli a-Stem
Kusukela emzimbeni womuntu okhishwe izicubu ze-adipose (nge-liposuction) uphathwa nge-ultrasonication ukususa izicubu kumaseli asezintweni namanye amaseli okukhula. Le ngxenye ehlukanisiwe yamaseli iyaziwa ngokuthi ama-cell stromal cells (SVF).
I-ultrasonic yokuhlukanisa amasu ama-stem cells avela kumcubu we-adipose isekelwe kuphela kwisimiso sokusebenza se-cavitation ekhishwa yi-ultrasonic, okuyinto ishear mechanical. Amandla okugcoba ama-cavitational aphazamisa izicubu ze-adipose, ukuze amangqamuzana e-stem akhishwe esakhiweni samathishu amafutha. I-ultrasonic stem cell isolation iyi-inzyme-free procedure, igweme ukusetshenziswa kwe-collagenase, trypsin, noma i-dispase.
Ukuze uhlukanise amaseli we-stem akhishiwe, amaseli we-mesenchymal stem, ama-precursor endothelial nezinye izinhlobo ze-cell growth, i-sonicated adipose tiscu is centrifuged.
Amaseli e-stem ahlukanisiwe aqoqwa futhi ahlaziywe ngekhwalithi yawo kubalwa ukubalwa kwamaseli, ukusebenza, i-endotoxin, ne-stain stain ngaphambi kokusetshenziselwa ngokushesha ukufakelwa kwe-autologous noma kugcinwe ku-cryo-storage.
Kungani kufanele ugweme ama-enzyme?
Njengoba ukugaya okwenziwe nge-enzymatic for stem cell isolation kuhambisana nezindleko eziphezulu kanye nezingozi zokuphepha kanye nokuphumelela kokusebenza kahle [Oberbauer et al. 2015], izindlela zokuhlukanisa okungezona-enzymatic ezifana ne-ultrasonic cavitation. Isinyathelo sokuhlukanisa i-ultrasonic sigxila ekugayeni kwe-enzymatic ngokuhlukanisa amaseli kanye nama-cell aggregates ngokuzenzakalelayo kusuka kumcubu we-adipose.
Ama-stem avela ama-Adiem
Ukunikezwa Kwamaselula Omzimba
Indlela ehlukanisiwe ye-SVF esebenzisa i-ultrasonic cavitation isivuno ku-1.67-2.24 × 107 amaseli ngokusebenza kwe-97.1-98.9% [uVictor, S., 2014]. Ukuthengiswa kweseli cishe kwezizigidi ezimbili kuya kwezingu-2 / amaseli / i-gram adipose izicucu ezitholwe yi-ultrasonication ye-adipocytes evuthiwe kumaseli we-adipose ehlukanisiwe [Bright et al., 2014].
Amaseli e-Ultrasonically alungiselelwe anamazinga ahlukene we-adipogenic ne-osteogenic, uma kuqhathaniswa ne-standard enzymatic isolation method [Oberbauer et al. 2015].
Izinhlelo ze-Ultrasonic ze-Stem Cell Isolation
Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha okuphakeme kakhulu kanye nekhwalithi engcono, imishini esebenzayo ye-ultrasonic, evumela ukulawula okuqondile phezu kokwelashwa kwe-cell stem, kuyisici esiyinhloko sokwelashwa okuphumelelayo kweziguli. Hielscher Ultrasonics inikeza izinketho ezahlukene for a autologous ultrasonic cavitation inqubo yokuhlukanisa ukuhlukanisa futhi kuvuna stem kanye endothelial precurse amaseli.
Ngokuba inqubo ye-stem cell isolation nge-sonication eqondile, uphondo lwe-ultrasonic (sonotrode, i-tip ultrasonic / i-probe) igxila emathisini we-adipose amanoni. Nge-sonotrode, amagagasi e-ultrasound ahlangene ngqo kuma-autologous ukuze i-cavitation ye-ultrasonic ikhishwe ama-cell stem nama-stromal cells kusuka emathisini asele. Amaprosesa we-Hielscher ultrasonic UP200Ht futhi UP200St nge-sonotrode S26d14 yizinhlelo ezivame ukusetshenziselwa ukwelashwa kwe-autologous stem cell. Ukuhlukaniswa kwe-SVF nge-sonication ngqo kulungele ukusetshenziswa ezindaweni zokuhlanza.
Njengoba amangqamuzana e-stem asetshenziselwa izicelo ze-autologous, ukuhlunga kwenqubo kubaluleke kakhulu. Ngakho-ke, i-Hielscher ithuthukise izinketho eziningana ze-sonication engaqondile njengokuthi I-GDmini2, I-VialTweeter nezinye izinhlelo zokusebenza ezihlelekile. Nge-sonication engaqondakali, amagagasi e-ultrasound ahlangene ngokusebenzisa isitsha sesidonga esihlokweni se-adipose. Ingxenyana ye-vascular stromal (SVF) ihlukaniswe kusuka kumathini adipose nge-cavitation ye-ultrasonic efanayo nanjengesikhathi sonication ngqo.
Inqubo ye-sonication engaqondile inikeza inzuzo ukucubungula amaseli esitsheni esivaliwe ngaphansi izimo ezingcolile ngoba ingozi yokungcoliswa ngokufaka i-ultrasound horn (sonotrode) isusiwe. Ukuhlukaniswa kwamaseli kwenziwa ohlelweni oluvaliwe ukuqinisekisa izimo zenqubo oyinyumba.
Amadivaysi e-ultrasonic ye-Hielscher angalawulwa ngokuqondile nge-touch display noma control browser. Izinqubo ze-Sonication zingenziwa ngaphambi kokusethwa ngemenyu enembile. Amadivaysi e-ultrasonic anemininingwane yokuqopha okuzenzakalelayo (yonke idatha ye-sonication proces igcinwe kwi-SD edidiyelwe). I-ultrasonic amandla wokufaka ingashintshwa ngokuqondile ku-cell isolation protocol.
Oberbauer, Eleni; Steffenhagen, uCarolin; I-Wurzer, uChristoph; UGabriel, umKristu; URedl, uHeinz; I-Wolbank, uSusanne (2015): Ama-enzymatic kanye ne-non-enzymatic ehlukanisa amaseli okwenziwa kwamaseli asuselwa ku-adipose: isimo samanje sobuciko. Ukuvuselelwa Kwamaseli (2015) 4: 7.
Amaseli esitembu angamaseli angenawo ama-multicellular engenawo amandla okukhiqiza amangqamuzana amaningi angapheli ofanayo. Zibonakaliswa ngamandla okuphawulekayo okuhlakulela abe yizinhlobonhlobo zamaseli ahlukene emzimbeni ngesikhathi sokuqala nokuphila. Isici esivelele kunazo zonke zamaseli ase-stem amandla abo okuzivuselela ngokwahlukana kweseli kanye nokukwazi kwabo ukuphenduka izicubu- noma amaseli athile asemzimbeni anomsebenzi okhethekile. Amaseli e-Pluripotent ama-stem angakwazi ukwahlukanisa kunoma iyiphi yamagciwane amathathu: i-endoderm (ingaphakathi lesisu esiswini, isisu somzimba, amaphaphu), i-mesoderm (isisipha, ithambo, igazi, urogenital), noma i-ectoderm (izicubu ze-epidermal nesistimu yezinzwa).
Ezingxenyeni ezithile, njenge-gut and bone, ama-stem cells ahlukanisa njalo ukulungisa futhi athathe izicubu ezigugile noma ezilimele. Kwezinye izitho, njenge-pancreas nenhliziyo, ama-stem amaseli ahlukana kuphela ngaphansi kwezimo ezikhethekile.
Amaseli we-Mesenchymal stromal / stem (MSC), anikezela amathuba amaningi okusebenza okwelapha ekudleni nokuvuselela imithi, atholakale emangeni, kodwa angakwazi ukuhlukaniswa nezinye izicubu (isib. Isinqabetho, amafutha, ama-muscle cells) futhi. Amaseli ase-Mesenchymal stem abhekwa njengama-cell stem omzimba omdala abonakala ngokukwazi ukuzivuselela.
Ucwaningo lwesitembu sezintambo nezindlela zokwelapha zisetshenziselwa ukuhlakulela izicubu kanye nezitho zokufakelwa ukufakelwa kwezitshalo (ubunjiniyela bezintambo). Ezinye izinsizakalo zezokwelapha ekusetshenzisweni kwama-stem cells zingatholakala ekwelapheni kwezifo zobuchopho (isib. Isifo se-Parkinson sika-Alzheimer's), ukwelashwa kwe-cell deficiency, isifo segazi (isib. I-leukemia), ukuhlanganiswa komzimba we-cartilage (isib. I-osteoarthritis) kanye nokwelapha izimonyo (isib. ukwelapha ukuguga). Ngokuvamile, amaseli we-stem anesayizi we-approx. 15-25 micron ububanzi.
Amaseli we-Mesenchymal stem (MSC) ama cell stromal amaningi, anekhono lokuhlukanisa izinhlobo ezahlukene zamaseli, kuhlanganise nama-osteoblasts (amangqamuzana amathambo), ama-chondrocytes (amangqamuzana omzimba), ama-myocytes (amangqamuzana omzimba), nama-adipocyte (ama-fat cells).
I-Stromal Vascular Fraction (i-SVF)
I-Stromal Vascular Fraction (i-SVF) iyisakhi se-lipoaspirate esingasuswa nge-liposuction kusuka kumzimba we-adipose emzimbeni womuntu. I-lipoaspirate iqukethe ingxube yezingqamuzana zamangqamuzana futhi inokuqukethwe okuphezulu kwamaseli ase-stem, awaziwa ngokuthi amangqamuzana ase-adipose-derived (ASC noma i-ADSC), abonisa ukufana namaseli we-marrow stem, njengokukwazi kwabo ukuhlukanisa ngamaseli amaningi.
Inani labantu abahlukumezekile be-SVF liqukethe amangqamuzana e-endothelial, i-erythrocytes, i-fibroblasts, i-lymphocytes, i-monocytes / i-macrophages, nama-pericytes phakathi kwabanye, kanye nengxenyana ebalulekile yama-stem asetshenziswe-adipose-derived cells.
Ama-Stromal / Stem Amaseli A-Admerated (ASC)
Ama-stromal / stem cells (ASC / ADSC) aphuma e-Adipose akhipha amazinga aphezulu okukhula okuyizinto ezinjenge-epidermal growth factor (EGF), i-vascular endothelial growth factor (VEGF), isisindo sokukhula se-fibroblast (bFGF), i-keratinocyte growth factor (KGF) , i-plategrived factor factor (PDGF), i-hepatocyte growth factor (HGF), ukuguqula ukukhula kwe-factor-beta (TGF-β), i-insulin growth factor (IGF), neurotrophic factor (BDNF) etholakala ebuchosheni. I-ACS ayikhipha kuphela izici zokukhula, ibuye ihlanganise ama-cytokines kuhlanganise ne-fros-related li-tyrosine kinase 3 (i-Flt-3) ligand, i-granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), i-granulocyte macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF), i-macrophage -colon stimulating factor (M-CSF), interleukin (IL) njenge-IL-6, i-IL-7, i-IL-8, i-IL-11, ne-IL-12, i-leukemia inhibitory factor (LIF), nesifo se-necrosis (TNF-α).
Ukukhishwa Kwezinhlobo Zama-Stem
Ama-stemcells omdala ase-Autologous avela kubantu angasuswa emithonjeni elandelayo:
Umnkantsha wamathambo, odinga isikhala ngokuvuna, okungukuthi, ukubhoboza emathanjeni.
Izicubu ze-Adipose (amangqamuzana e-lipid), okudinga ukwenziwa yi-liposuction.
Igazi, elidinga ukukhipha nge-apheresis, lapho igazi elivela kumnikeli lidlulela khona “i-dialysis” umshini lapho ama-stem avela khona ngenkathi ezinye izingxenye zegazi zibuyiselwa kumnikeli.